Fikelela7: Bandakanya abaphulaphuli abathetha iilwimi ezininzi kwimidiya yokuncokola | Martech Zone
Fikelela7 ifuna ukwenza kube lula kubantu ngabanye nakumashishini ukuba bandise ukufikelela kwabo kwezentlalo kwihlabathi liphela. Nge-Reach7, abasebenzisi bachonga kwaye bazibandakanya nabaphulaphuli abafanelekileyo kwimidiya yoluntu ngokulula nangokufanelekileyo.
Iqonga labo linceda abasebenzisi ukwakha abaphulaphuli abafanelekileyo kwimarike yabo yendawo okanye basebenze ngokufanelekileyo ukuzibandakanya nemarike yehlabathi. Amashishini okanye abantu bayakwazi ukwenza ii-tweets kwii-80 zeelwimi ezithethwa kakhulu kwihlabathi. Iipesenti ezingama-90 zeenguqulelo zigqitywe kwiyure, ubukhulu becala kwimizuzu.
Ongezelelweyo Ukufikelela kwiimpawu ezi-7
Ukukhuliswa kwabaphulaphuli -Khula ngokuzibandakanya ekujoliswe kuko. Chonga abantu kunye nomxholo oza kuwulandela, ukuthanda nokwabelana.
UkuBekwa ngokuBalulekileyo -Gcina ixesha ngokukhetha kwethu okwahlukileyo okufumana iziphumo ezilungileyo.
Linganisa impumelelo -Ubungqina bukupudding. Fumana yonke imihla, amanani eveki onke malunga nendlela ukubandakanyeka kwakho kubangela ukuba abalandeli abatsha
Yenza indawo yeTwitter -Fikelela kwiimarike ezingama-80 + kunye nokuguqulelwa kwemithombo yeendaba yoluntu ekuhlaleni.
Icandelo labaphulaphuli Cwangcisa amaqela ekujoliswe kuwo abe ngamaphulo ukuze ugxile kumaqela ahlukeneyo ngeentsuku ezahlukeneyo.
Research -Bona i-footprint epheleleyo ye-intanethi yabo bonke abantu abachaphazelekayo njenge-LinkedIn, ibhlog, iPinterest njl.
Zama ukufikelela kwi-7 simahla
Reach7 nayo ineHootsuite Iplagi, ukuze uyisebenzise ngokuthe ngqo kwiHootsuite kwideshibhodi ukucwangcisa kunye nokupapasha iiTweets.
Ukufikelela7 kubonelela ngezicwangciso ezintathu:
Isicwangciso sokuqala, inkonzo yasimahla egqibeleleyo kubantu abafuna ukwandisa ukubandakanyeka kwabo kwimidiya.
Isicwangciso esipheleleyo, i- $ 19.99 / ngenyanga, ilungele amashishini, iinkampani ze-e-commerce, kunye namasebe ezentengiso afuna ukubandakanya abantu ekujoliswe kubo kwimidiya yoluntu.
Okokugqibela, isicwangciso sePro kwi- $ 59.99 / ngenyanga yeyona ilungileyo kumashishini anamacandelo amaninzi abasebenzisi kwiimarike ezingaphezu kwesinye, kunye nabaqeshi kunye neearhente ezincinci.
I-Reach7 inabathengi abangaphezulu kwama-5,000, inani elikhula yonke imihla kwaye libandakanya iinkampani ezinje ngeWorldpay, Re / Max, Sharp, kunye neViking Direct.
tags: iplagi ye hootsuiteinguqulelo yabantukumazwe ngamazweiilwimi ezininziezininzi ngeelwimifikelela7Imidiya yokuncokolanxaxheba kwezentlalotranslationweposiTwitterokwasekhaya kwi-twitter